Maitiro ekuverenga nekupindura WhatsApp pasina kubuda online | Nhau dze iPhone
Miguel Hernandez | 15/05/2022 18:00 | dzakawanda
WhatsApp, iyo inonyanya kufarirwa yekukurumidza meseji application munyika, kana ingangoita iyo ine vakawanda vashandisi, pasina chero hurukuro. Mushure mekutorwa kwayo neFacebook, ramangwana rayo rakasvibiswa, zvisinei, kuvandudzwa kunogara kuchiitwa uye kushanda kwaita WhatsApp chishandiso chikuru chekukurukurirana munyika.
Nekudaro, dzimwe nguva isu tinoda kukwanisa kuwana zvirimo pasina kutariswa nevamwe, saka Tiri kuzokudzidzisa kuverenga nekupindura WhatsApp pasina anoziva kuti uri online, nhevedzano yematipi uye maficha ayo achaita kuti hupenyu hwako huve nyore pa iPhone yako uye kubvumidza iwe kubvisa zvinorema zvinhu.
Munguva pfupi yapfuura mu WhatsApp "maitirwo" akabatanidzwa basa rakagarwa nhaka kubva kuFacebook uye mameseji application ayo akanyatsobatanidzwa, asi izvo hazvigadzirise dambudziko diki, rekugona kuverenga nekupindura WhatsApp pasina kuoneka "pamhepo", kana pasina vanhu vaiziva kuti yakabatana neapp. Tichakuudza zvese izvi zvidiki tricks.
1 Batidza chiratidziro muNotication Center
2 Kushandisa Siri
3 Pindura kubva pazviziviso
4 Dzima kubatana kwako kwekupedzisira
Batidza chiratidziro muNotication Center
Iyo Notification Center inotipa pfupiso pfupi yemameseji eWhatsApp atakagamuchira, zvisinei, inoratidzika se "meseji" uye haizotiratidze zvirimo, kana kwete kana mudziyo wakavharwa. Kuti ukwanise kuwana aya mameseji nekukurumidza uye nekuaona kubva kuChiziviso Center, unongofanirwa kupinda WhatsApp uye nekutevera mirairo inotevera: Settings> Notifications> Preview> On.
Neiyi nzira, iwo mameseji anogamuchirwa anozoratidzwa zvizere muChiziviso Center, asi isu tichine imwe yekumisikidza, inova inotevera: Zvirongwa> Zviziviso> WhatsApp> Ratidza previews> Nguva dzose.
Aya ndiwo maratidziro acharatidzwa zvisinei nekuti iPhone yedu yakakiiwa here kana kwete, chimwe chinhu chinoita kuti basa redu rive nyore.
Tinogona zvakare kushandisa Siri kutaura nezvese mameseji eWhatsApp atatambira tobva taaverenga rimwe nerimwe, tichiziva kuti ndiani atitumira. Kuti tiite izvi tinofanira kutevedzera inotevera configuration nzira: Zvirongwa> Siri uye Tsvaga> WhatsApp Bvunza Siri> Activate.
Kana tangove neshuwa kuti iyi gadziriso yaitwa zvechokwadi, isu tichangopa iyo chaiyo rairo: Hei Siri, ndiverengere mameseji angu eWhatsApp.
Neiyi nzira ichativerengera mameseji eWhatsApp atakamirira, kutanga ichatizivisa nezveatumira meseji yataurwa uye yozotiverengera zvirimo mumwe nemumwe. Iyi pasina mubvunzo ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekuverenga WhatsApp mameseji pasina anoziva.
Pindura kubva pazviziviso
Kudyidzana nezviziviso chimwe chinhu chakabatanidzwa mune dzakasiyana vhezheni dzeIOS uye iPadOS kwenguva yakati rebei, saka musimboti isu tinofanira kutoziva nezvazvo, asi tinokuyeuchidza kuti zviri nyore sei. Iwe unongofanirwa kudzvanya kwenguva refu pane meseji yawakagamuchira muChiziviso Center uye iyo keyboard ichavhura pazasi pechidzitiro kuti ugone kupindura kune yakataurwa meseji.
Nenzira iyi, iwe unozopindura kune yakasarudzika meseji pasina kuisa iyo application, saka, iwe hauzoratidzike "pamhepo" kana kubatana uye nguva yekupedzisira yekubatanidza kwako haizooneke kunyangwe iwe wakakwanisa kuverenga nekupindura akadaro meseji, imwe yenzira dzinokurumidza uye dzinonakidza dzekudyidzana nemameseji pasina anoziva.
Dzima kubatana kwako kwekupedzisira
Rangarira kuti iwe unogona kugara uchiita iro rekirasi basa rekudzima iyo yekupedzisira yekubatanidza uye kunyangwe cheki yebhuruu yekuverenga meseji. Iyi ndiyo nhanho yakajairika yekuramba "usingazivikanwe" zvachose paunopinda nekubuda paWhatsApp, nekudaro uchidzivirira maziso eavo vanoziva nguva yekupedzisira pawakapinda muapp kana kupindura meseji. Ini pachangu handina kugadziridzwa uku, asi ndinogona kunzwisisa kuti nei yakakosha kune vamwe vashandisi.
Kumisikidza / kudzima zvisimbiso zvekuverenga, ndiko kuti, cheki yebhuruu, isu tinongofanira kupinda WhatsApp > Settings > Account > Privacy > Verenga marisiti. Panguva ino zvakakosha kuziva kuti kana ukadzima marisiti ekuverenga, hauzokwanisi kuonawo evamwe. Hurukuro dzeboka, hongu, dzinogara dzichigamuchira kuverenga kwekusimbisa, kunyangwe isu taita kuti basa iri rishande.
Panyaya yekubatana kwekupedzisira, tinofanira kutevera nzira WhatsApp> Zvirongwa> Akaunti> Yekupedzisira. nguva uye kamwe mukati gadzirisa chiitiko:
Wese munhu: Chero mushandisi ane nhamba yako yakanyorwa mubhuku renhare achakwanisa kuona yako yekupedzisira kubatana kuWhatsApp.
Vandinoshamwaridzana navo: Chete vanobatika vawakawedzera kubhuku rako rekero ndivo vachakwanisa kuona yako yekupedzisira kubatana kuWhatsApp.
Mazita angu, kunze kwe: Zvakanyatsofanana nebasa rekare, asi isu tichakwanisa kuwedzera zvakasara, kureva, vamwe vashandisi vatisingade kuona yedu yekupedzisira kubatana paWhatsApp.
Hapana: Mune ino kesi, hapana mushandisi achakwanisa kuona yedu yekupedzisira kubatana kuWhatsApp.
Uye aya ndiwo matangiro atakuunzira kuti ugone kupindura WhatsApp meseji uye uverenge pasina chikonzero chekuti chero munhu azive kuti wakabatana kana kuti wanga uri mukati mekushandisa, chimwe chinhu chinopa "plus" ye kuvanzika uye runyararo kune yako zuva nezuva uye izvo zvinogona kuita kuti hupenyu hwako huve nyore. Tinokuyeuchidza izvozvo yedu Discord chiteshi inowanikwa kune vese vashandisi kwaunogona kuwana aya matangi uye akawanda akawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Maitiro ekuverenga nekupindura WhatsApp pasina kuoneka online